travelgermany Archives | Londoloza Isitimela
Ikhaya > travelgermany
Iziqongo zezintaba ezihlaba umxhwele, izigodi eziqhakazayo, izimpophoma, emachibini, nezilwane zasendle ezahlukahlukene, Ikhaya laseYurophu ezinqolobaneni zemvelo ezingenakulibaleka emhlabeni. Ukuchitha imali emazweni amakhulu aluhlaza aqhakaza entwasahlobo, 5 eziqiwini zemvelo ezinhle kakhulu eYurophu zivikelwe amapaki kazwelonke amukela abahambi abavela kuwo…
Eminye yemibono emihle kakhulu eYurophu ayigugu futhi kulula ukuyifinyelela. Noma kunjalo, uhambo oluya eYurophu lungabiza impela uma ungahleleli kusengaphambili. Ngenkathi izinhloko-dolobha eziningi zaseYurophu zizokwelula isabelomali sakho sokuhamba, kunezindawo ezimbalwa impela…
Ukuya eYurophu kubuya emuva esikhathini ezweni elakhiwe lasezigodlweni, amahlathi, nemvelo enhle kakhulu nezimpophoma. Ukuthi uya e-Italy noma eSwitzerland, ukuhlela a 2 uhambo lwezinyanga ezingama-euro, noma ube nesonto izwe elilodwa laseYurophu,…
Isikhathi ekugcineni sesifikile – ukuthi usanda kuphothula inyuvesi, uphokophele out vacation yakho yonyaka, noma uthathe isinqumo sokuthi nokuyenga kwezwe travel ayikwazi aphuthelwe, okhethe ukuhamba Europe ngesitimela. Kuwumqondo romantic, uhambo bahamba…
Amsterdam yidolobha elihle ukuvakashelwa. Kuningi ukubona wenze lapha ukuthi cishe ngeke uthole nesithukuthezi. Nokho, nalokho bekusayoba omkhulu ukuxubanisa izinto. Lokho kungenxa yokuthi Amsterdam kuyinto enkulu yekucala emangalisayo eziningana…
Uma nje waqala uhlela uhambo ngokusebenzisa Bavaria eJalimane, cishe uyazibuza mayelana uhambo. Wena cishe ugajwe inani nje lilodwa lezimemezelo izindawo amazing ukuvakashelwa. plus, ufuna uvumelane nabo bonke 10 izinsuku uhambo…
Okukalwe Day Trips Ukuze Thatha Kusukela Berlin kuthiwa kumelwe nakanjani naphezu Berlin ngokwayo lisaba yindawo okungenwa kumnandi ukuvakashela! Kukhona ngokwanele ezikhangayo ezinkulu eJalimane capital uhlale kuyo izinsuku. Nokho, usuku uhambo kusukela Berlin kuya emadolobheni angomakhelwane nasemaphandleni…
Europe yindawo emangalisayo umhlangano semiphakathi eminingi ehlukene - kanye namasiko Culinary. Zonke izizwe has ubunikazi bayo obuhlukile, eveza izivakashi ngqo nomlando wayo nakho konke okunye inikeza. Futhi emazweni athile, ukuthi futhi kusho iziphuzo flavorful! Labo…
amaswidi Local beze izinhlobonhlobo eziningi kulo lonke elaseYurophu. Njalo izwe kanye nesifunda unendlela yawo kancane uswidi siyaziqhenya ukunikela. Izivakashi nge izinyo elimnandi, akukho ngaphezulu yiziphazamiso ezihehayo mayelana ukuhamba kuka okuthandwa entsha. Nazi top yethu 5 engcono…